Kuze kube manje, i-Inthanethi eziningi abantu ngenxa yezizathu ezihlukahlukene udala ngempahla yabo. Ukuze wenze lokhu, zikhona ezisekelweni eziningi futhi CMS. Kodwa ngokuhle kunakho konke kwawo namanje Wordpress. Lo mbono akulona elami kuphela, kodwa kweningi.
Lapho ngiqala usethe ibhulogi yakho ku-CMS, ngase ethukile ukudideka admin. Nalapho azange ngazi bona kuphi uchofoze. Ngihlupheke beyofuna izilungiselelo ezidingekayo.
Nokho, ne kufika isikhathi amakhono kanye dexterity livela. Manje Ngiyakuzwa WordPress, ngakho ukukhuluma "kuwe", kodwa ngoba ungaba okuthile ukweluleka labo befika nje kuyi-Internet futhi wanquma ukuqala nge ngcono wonke amakhasi alo Inthanethi.
Uma wakha ibhulogi yakho ku WordPress injini, khona-ke buza umcabango ngcono ukusebenza nsiza.
Futhi ke eze izincwadi usizo indlela yokwenza abgreyd vorpress kusayithi lakho. Ziningi kwi-inthanethi futhi ngicabanga zonke abafundi, ngemva Ukufundwa ahlale ngimbonga nakho Inthanethi ompetha uhlobo ewusizo.
Mina ngokwami ukufunda izincwadi ezifana nalezi lapho ngifuna indlela yokwenza izixhumanisi, izithombe izihloko yakho yangaphambilini. Ngabe sengiyiswa kakhulu wasiza incazelo yalezi plugin. Ngenxa iseluleko inthanethi ochwepheshe, ngasheshe ngamakhasimende kanye akwazi ukufaka futhi ulungiselele anezele ezidingekayo Vorpress.
Lapho evivinywa, ezinye inombolo esikhulu sazo ukukhetha okungcono. Futhi manje-ke efakwe wonke amasayithi wami.
I-plugin Kulula kakhulu ukufaka futhi ulungiselele. Khona-ke ukubona ukuthi ngobunono afakwa design izixhumanisi isithombe isisetshenziswa ngaphansi ngamunye yokukhishwa kwawo.
Sekuyisikhathi eside ngaqaphela ukuthi ngokuvamile kakhulu basabela isithombe ngokushesha kunokuba umbhalo. Futhi iqiniso lokuthi okwamanje isithombe - kuyindlela ephumelelayo yokuthuthukisa isayithi yakho ku-inthanethi - ubufakazi ukuthi iningi kangaka-iyaphendula.
Lokhu kusikhumbuza isaga "meet izingubo ...".
By the way, iningi Izibuyekezo kwi-inthanethi mayelana i-plugin "Posts Related" omuhle kuphela. Futhi lokhu akumangalisi, ngoba abalobi kukhona labo asebamukele ukuba babe nakho eside ekudaleni-add-on for WordPress injini.
Faka kuwebhusayithi yakho lokhu plugin futhi uqiniseka bayokujabulela. Okwamanje esematheni kakhulu yezici kokuziphatha. Isithombe-link, okuletha lokhu ibhekwa, waphoqa umfundi ukuze uhlale kusayithi lakho futhi ufunde elilodwa encwadini ngezindawo. Cabanga ukuthi singakanani isikhathi umsebenzisi izobamba kusayithi lakho? Futhi lapho kukhona ezinkulungwaneni noma? Khona-ke ngokuqinisekile Alex-isikhundla sikubeke izintandokazi.
Uma anikholwa yimi, ke ukuqala ezingosini ze-inthanethi, ungene ku blogs eziningana lapho phansi sihloko ngasinye uthumele izixhumanisi isithombe futhi siqiniseke ukuthi incwadi ngayinye entsha, uphela, futhi kufanele ukumenywa ukuthola ulwazi oluningi ku ngesihloko esifanayo. Futhi off ukufunda engasakwazi. Ngithanda ukuqondisa ukuncela ulwazi oluwusizo ngesihloko.
Ngenkathi yokugcina kungenzeka kabanzi ngami. Mina isanda zamangala Charter, ukuthi Ngithanda ukufunda okuthile okusha, okuyinto exhunywe kwi-Inthanethi.
Kodwa emuva-plug-in "izincwadi Ezihlobene". Njengoba liye laqiniswa abasebenzisi eziningi, kuhlanganise nami, lokhu ibhekwa iyithuluzi eliwusizo ukuze kuthakazelise umfundi bambeke kuyinto kusayithi isikhathi eside kunaye kulindeleke. Nokho, eqinisweni, lokhu plugin ewusizo ekukhuthazeni isayithi jikelele
Kuyinto isifanekiso Joomla kanjani? Indlela ukufaka Joomla isifanekiso?
8 izimpawu ukuthi okuthunyelwe eziningi kakhulu ukuxhumana nomphakathi
Ukususa ikhasi VKontakte phakade
Nciphisa emikhonweni: izinhlobo, izici, isabelo. Nciphisa ifilimu
Ukuzamazama komhlaba e-Oklahoma: kubangela, imiphumela
Hleka kungavunyelwe: Amanda Bynes e esibhedlela sabagula ngengqondo
Pushkin: "Ngiye yamisa lesikhumbuzo elingenziwe ngezandla. '" Umlando kokudalwa ukuhlaziywa okwakhe kwezobuciko
I-oda iqoqo. ukusebenza iqoqo. Ngakho kungakhathaliseki ukuthi kuyinkimbinkimbi?
Lombhishobhi okusha - inyunyana kamoya
Indlela ukupheka lula: zokupheka ezimbalwa ezilula
Anime "Ukuthinta eziyinkimbinkimbi (Inxanxathela Lovely)"